बिनाकाममा घर बाहिर निस्क नेलाई कानूनी कार्वाही हुने, मास्क नलगाए यति सम्म जरिवाना हुन् सक्ने ! – Khabar Patrika Np
बिनाकाममा घर बाहिर निस्क नेलाई कानूनी कार्वाही हुने, मास्क नलगाए यति सम्म जरिवाना हुन् सक्ने !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २३, २०७८ समय: ०:४१:४३
काठमाडौं । अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर निस्कन पनि रोक लगाउने निर्णयलाई यथावत कायम राखी यसअघि जारी भएका सबै पास खारेज गर्ने निर्णय गरिएको अनावश्यक रुपमा हिँड्न समेत नपाइने बताए।
मंगलबार बसेको तीनैवटा सीडीओ कार्यालयहरुको बैठकले अत्यावश्यक कामबिना घरबाट बाहिर निस्कनेलाई जरिवाना र कानूनी कार्वाही गर्ने निर्णय गरेको हो । घरबाहिर निस्कनेलाई यसअघि होल्डमा राख्ने गरिएपनि अब भने जरिवाना र कार्वाही गर्ने निर्णय समेत गरेको सीडीओ पराजुलीले जानकारी दिए । काठमाडौंमा २९ गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ ।
‘यो अघिको निषेधाज्ञामा अनावश्यक रुपमा हिँड्नेहरु पनि देखिए, त्यसले गर्दा पनि निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा जस्तो भएन, यो पटक भने कडा हुन्छ, हामीले प्रहरी प्रशासनलाई त्यही अनुसार गर्नका लागि निर्देशन दिन्छौं,’ प्रजिअ भट्टराईले भने।
मास्क नलगाउनेलाई १०० रुपैयाँ जरिवाना तिराइने भएको छ । विभिन्न बहानामा मनपरी हिँड्ने, मर्निङ र इभिनिङ वाकमा निस्कने प्रवृत्ति देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।